XOG: Xasan Sheekh oo kasoo Horjeestay Qorshaha Mahad Salaad & Xildhibaanada kale ee Damu-Jadiid… – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAXOG: Xasan Sheekh oo kasoo Horjeestay Qorshaha Mahad Salaad & Xildhibaanada kale ee Damu-Jadiid…
Xog gaara ayaa sheegeysa in Madaxweynihii Hore Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu qadka Taleefanka kula soo hadlay inta badan xildhibaannada ugu cad cad ururka Damuljadiid oo ay iskala tirsan yihiin.
Xasan oo maalmahan dambe aad ula socday waxyaabaha ka socda Muqdisho iyo doodaha xildhibaannada Damuljadiid iyo sidey dowladda u mucaaradeen ayaa hadda wuxuu faray Hal arrin oo kaliya.
Wuxuu ka dalbaday in dowladda aan la carqaladeen oo umadda Soomaaliyeed u arag Damuljadiid kuwo dalka u diidan inuu dego.
Wuxuu si gaar ah u faray Xildhibaannada aadka u dooda maalmahan dambe ee ururkaasi kamidka ah, in sharafta ururka ilaaliyaan, mucaaradnimada xilligaanna ay waqti u yeelaan.
Xasan ayaa isaga u muuqda mid hadda aan dooneyn in lagu sii fogaado mucaaradista dowladda Farmaajo hoggaamiyo.
40,824 total views, 1,577 views today
40,824 total views, 1,577 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
40,897 total views, 1,577 views today
40,897 total views, 1,577 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
40,909 total views, 1,577 views today
40,909 total views, 1,577 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
40,934 total views, 1,578 views today
40,934 total views, 1,578 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
40,964 total views, 1,577 views today
40,964 total views, 1,577 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]